Nhau - Mingshuo Electric akapasa TUV certification uye akawana goridhe chigadzirwa chitupa uye simba chitupa
Mingshuo Electric akapasa TUV certification uye akawana goridhe chigadzirwa chitupa uye simba chitupa
Muna 2017, Mingshuo solid state high frequency welding muchina wakawana Russian GOST - R chitupa nekuda kwezvinodiwa nevatengi 'Welding muchina zvitupa; Muna 2020, Mingshuo Boka rakakunda tekinoroji patent pamushini wekutema, uye vamwe vabereki vanoverengeka nezve welder vari kunyorerwa.
Baoding Mingshuo Magetsi akapasa TUV certification kekutanga mu2019 uye akahwina ichi chitupa zvakare mu2020 .Certification inonyanya kusanganisira kugadzirwa chitupa, kumisikidzwa chitupa uye hupfumi simba chitupa. Fekitori neyechitatu-bato chitupa chemuviri.Vatengi vanogona kudzidza nezve Mingshuo fekitori yakananga kubva online fekitori yakazara-inofamba vhidhiyo, kuti vashanyire fekitori yako vasingabude, uye chengetedza imwe nguva nesimba revatengi. vakagadzirira vatengi zvitsva nezvitsaru kushanyira fekitari yedu chero nguva uye kudzidza kugadzirwa muitiro Welding michina.
Nekuda kwekuenderera kuri kuwedzera bhizinesi, Mingshuo Boka rakavaka musangano mutsva muna 2016. Rimwe gore gare gare, vese vashandi nemidziyo yeBaoding Mingshuo vakatamira kune imwe saiti nyowani, uye nzvimbo nyowani yemiti inowedzera nekatatu, nzvimbo yehofisi yakawedzera neumwe nguva. Huwandu hwevashandi hwakawedzera zvakapetwa kana. Munguva iyi, Mingshuo anogara achivavarira kupa mimwe michina mitsva nemasevhisi kune vatsva nevakuru vatengi. Kubudikidza nekuedza kusingaperi, chikamu cheMingshuo chemumba uye chepasi rose chiri kuwedzera. isu takakokwa kutora chikamu mumubatanidzwa wesimbi pombi musangano uye tigova nhengo yesangano. Kuburikidza nekutaurirana pamwe nekushandira pamwe, tave nekugona shanduko nyowani muindasitiri, takanzwisisa izvo zvinodiwa nevatengi pakutanga, uye takashandira vatengi zvirinani. Mumakore akatevera, takaenda kuPakistan, Iran, Turkey, Germany, Brazil, Thailand nedzimwe nyika kunotora chikamu pakuratidzira, uye isu zvakare tine vedu vamiririri muIndia.